Fiara Skoda Yeti: fahazoan-dàlana, famaritana ary fanamarihana
Teo aloha, ny sarety Skoda dia tsy namokatra sarety sy gara fotsiny, fa tamin'ny taona 2009 dia niditra tao an-tsena ny crossover Yeti subcompact. Ny fahaiza-miasa, ny fahazoana avo ary ny mampiavaka azy hafa dia nahatonga ity fiara ...
ZiD-50 "Pilot" - ny moped malaza Rosiana
Mamafy azy ireo. V. Degtyareva, fantatsika kokoa amin'ny hoe ZiD, dia natsangana nandritra ny Ady lehibe voalohany. Tamin'izany no nanomboka namboarina tao Kirov ny trano voalohany an'ny milina fitifirana basy Kovrov. Taona maro taty aoriana,…
63 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 2,390.